China AD03 CBD / THC Disposable Vape Pen With Bottom Rechargeable Port Manufacturer Ceramic Coil No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor factory na ndị na-emepụta | Akwụkwọ vaịn Alphagreen
Nkwenye nke afọ
Iji jiri mkpokọta Alphagreenvape ị ga-abụ afọ iri abụọ na otu ma ọ bụ karịa. Biko nyochaa afọ gị tupu ị banye na saịtị ahụ.
Adị m 18 ma ọ bụ karịa
Adị m n'okpuru 18
Anyị na-eji kuki iji melite weebụsaịtị anyị na ahụmịhe gị na-eme nchọgharị na ya. Site na ịga n'ihu na ebe nrụọrụ weebụ anyị ị na-anabata iwu kuki anyị
Ndo, anaghị anabata afọ gị
AD03 CBD / THC Disposable Vape Pen With Bottom Rechargeable Port Manufacturer Ceramic Coil No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor
Short Description ： Anyị na-Nlụpụta na ọkọnọ AD03 CBD / THC disposable vape pen, ezi imewe nke vape dị na-eweta ọtụtụ mgbe ahịa. Tụkwasị na nke a, anyị na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enye ikikere nke ụlọ ọrụ na-akwadoro maka ọtụtụ afọ, na-ekpuchi ọtụtụ ahịa North America na Europe. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
F0B Ahịa: US $ 1.85 - 2.0 / Ibe
Min.Order ibu: 100 iberibe
Tụkwasịnụ Ikike: 300,000 iberibe / ọnwa
Kwụ Tergwọ Okwu: T / T, PayPal, L / C, D / A, Ka / P
Dị ka a emeputa nke vape ngwaike na China, anyị nwere ndị kasị ọkachamara GMP ọrụ-shop. Anyị na-enye bụghị naanị elu àgwà dị iche iche nke katrij kamakwa ọhụrụ ụdị disposable vape pen. Anyị na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ mgbe niile. Anyị na-enye ọrụ OEM / ODM maka ndị ahịa anyị, ị nwere ike ịbụ otu n'ime ha dị ka ndị ahịa na-acha ọcha. Ihe bụ ihe ọzọ, 5-Stars ahịa ọrụ bụ anyị ibu engine na CBD vape ụlọ ọrụ na ogologo oge. Ewezugakatrij na pen pen, anyị na- weta vape ngwa na ahaziri nchịkọta.
1. Product Okwu Mmalite nke AD03CBD / THC Disposable Vape Pen
AD03 CBD / THC disposable vape pen bụ otu n'ime anyị kasị ewu ewu na ike disposable vape pen. Ọ bụ a obere ụdị disposable vape pen, na ọ bụ ndị kasị dị ka ụtaba anya pen. Ọ mere na iko tank seramiiki n'ọnụ, edu-free ọla, na elu ọkwa owu.
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke oghere oriri mmanụ bụ 1.7mm, usoro pụrụ iche na-eme ka ọnụego absorption dị ukwuu. Jiri nta oriri oriri size, ma i nwere ike vape ọzọ lorịị.
Batrị anyị na-eji A ọkwa batrị nwere 350mAh ikike, ọ bụ kpam kpam iji vape otu gram mmanụ, n'ihi na batrị na-ebelata n'oge nchekwa (Anyị na-enyocha batrị ọ bụla na afọ batrị ọ bụla tupu ebufe), iji gbochie nsogbu a, anyị emebela nkwụghachi n'ọdụ ụgbọ mmiri na ala. Yabụ ịchọghị ịma gbasara nsogbu batrị.
2. Oke oke ngwaahịa (Nkọwapụta) nke AD03 CBD / THC Disposable Vape Pen
CBD / THC vape katrij / AD03
Metal / Pyrex iko / Efere eriri igwe
D 10.5mm & L 94.3 / 106mm
Mmanụ oriri onu
2 * 1.0mm / 1.5mm / 1.7mm （Omenala Size）
3. Njirimara Ngwaahịa na Ngwa nke AD03 CBD / THC Disposable Vape Pen
——High absorption rate, uwe maka nnukwu mmanụ. (Mmanụ oriri onu customizable)
——Na-agbanye mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri.
——Ọ dịghị ọla dị arọ, ụdị enweghị ntụnye.
——Nọdụ maka ụdị CBD / THC dị iche iche.
——O nweghi nchepụta.
—— pekpụrụ Efere Pụrụ Iche
—- Kwado OEM / ODM Ọrụ
4. Production Nkọwa nke AD03 CBD / THC Disposable Vape Pen
As Mgba mfe igba THC ma ọ bụ CBD mmanụ, 0.5ml & 1.0ml tank tank.
② Kpamkpam adịghị arọ metal.
③ High mmanụ absorption ọnụego, uwe dị iche iche ọkpụrụkpụ mmanụ.
④ Omenala logo obibi na dị iche iche n'ọnụ agba, na-eme gị onwe gị na ika
Obere ụdị, 1gram dị 106mm.
⑥ 350mAh nnukwu ikike batrị, zuru ezu maka otu gram.
Port Chaja n'ọdụ ụgbọ mmiri dị na ala.
Nke gara aga: AD01-2 CBD / THC Disposable Vape Pen Manufacturer Ceramic Coil No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor
Osote: AD10 CBD / THC Pod Disposable Vape Pen With Bottom Rechargeable Port Manufacturer Ceramic Coil No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor
cbd mmanụ vape disposable
cbd mkpịsị penpe
seramiiki vape pen
mkpofu vape pen
pen na-akwụ ụgwọ vape pen
Ihe Mgbaru Ọsọ Anyị nke Ekike bụ Ergonomic,
ihe ohuru, Na aru oru, ma mezuo ihe ndi ahia choro.
Ekwentị:: +86 13559135783
Adress:5th Ft, No.3 Building, Ji An Tai Industrial Park, Tian Fu Road, Bao'an District, Shenzhen, China
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, cbd mkpịsị penpe, batrị vape pen, mkpofu vape pen, 510 batrị, cbd mmanụ vape disposable, pen na-akwụ ụgwọ vape pen, Ngwa niile